Thursday April 04, 2019 - 09:40:57 in Wararka by Super Admin
Afartii Bishii Apriil sanaddii 2017 maanta oo kale ayay ciidamada gummeysiga Itoobiya isaga huleeleen Ceelbuur kadib hareereyn sedax sanadood qaadatay oo ay kusoo rogtay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Dadka Reer Ceelbuur ayaa magaalada isaga qaxay markii Itoobiyaanku qabsanayeen 26,March sanaddii 2014, faarujinta shacabka ee magaalada ayaa suurta gelisay in hareerayn raagto lagusoo rogo Itoobiyaanka oo ugu dambeyn ku qasbanaaday in ay magaalada isaga cararaan.
Laba sanadood kadib isbedello waaweyn ayaa laga dareemayaa magaalada Ceelbuur waxaa dib uga shaqa bilaabay dhammaan adeegyadii bulshada, boqolaal qoys ayaa guryahooda dib ugusoo laabtay sidoo kale waxaa dib loo howlgeliyay xarumihii maamulka iyo goobihii bulshada loogu adeegayay.
Ganacsato iyo dad deegaanka ah ayaa bilaabay in ay dib udayactirtaan guryahooda halka magaalada laga dhisayo guryo cusub arrinkaas oo wax ka bedelay bilicda magaalada Ceelbuur.
Ceelbuur waa magaalo istiraatiiji ah oo taariikh fac weyn leh dadka magaaladan dega ayaa taariikh dahabi ah ku leh halgankii lalasoo galay gumeystihii caddaanka iyo halganka hadda lagula jiro gumeystaha Madoow ee Xabashida.